NextMapping | Habdhaqanka Ugu Fiican ee Shaqaalaha Remote
NextMapping™ Mustaqbalka Shaqada Blog
Kusoo dhawow buugga mustaqbalka ee Shaqada - halkan waa meesha aad ka heli doontid qoraallada ku saabsan wax kasta oo la xiriira mustaqbalka shaqada.
Eeg dhammaan qoraalada dhegaha
Habdhaqanka Ugu Fiican ee Shaqaalaha Remote
Waxaan sameynay sahanno badan oo shaqaalaha fogfog ah waxaanan soo ururinay sida ugu fiican ee shaqaalaha meelaha fogfog looga shaqeeyo.
Siyaabo badan ayaa waxaa jiray is afgarad guud oo ahaa in marka 2020 dhammaato ay jiri doonto dareen ah in dib loogu noqdo 'caadi'. Wax kastoo caadi ah ayaa ag jooga heerarka maanta waxaa muuqata inay jirto xaalad cusub oo soo baxday.
Waxaan sahamin ku sameynay in kabadan 1000 shaqaale fog ah waxaanna weydiinay: "Ma rabtaa inaad ku laabato goobta shaqada waqti buuxa marka masiibada la xakameynayo?"
In ka badan 90% jawaabeyaasha ayaa sheegay in aysan rabin in ay ku laabtaan goob shaqo oo hor leh oo Covid ah.
Jawaabaha sahanku naguma ahayn wax lala yaabo NextMapping - waxaan diiradda saarnay isbeddellada bulshada iyo maskaxda shaqaalaha si ay saameyn ugu yeelato mustaqbalka shaqada tobankii sano ee la soo dhaafay.
Markii aan la wadaagno tirakoobka kor ku xusan hoggaamiyeyaasha waxay xaqiijinayaan in sahankooda gudaha ee shaqaalahooda ay muujinayaan jawaab la mid ah. Haddii shaqaaluhu rabaan inay sii wataan shaqada ugu horreyn fog waxay ka dhigan tahay in shirkado badan ay u baahan yihiin inay dib u eegaan nidaamyadooda iyo ilaha ay ku taageerayaan goobta shaqada ee fog ee mustaqbalka.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha shirkadaha ayaa la dagaallamaya rabitaanka shaqaaluhu inay ka shaqeeyaan meel fog waxayna amrayaan habka 'ku noqoshada xafiiska'. Habkani si fiican uma shaqeyn doono mustaqbalka fog. Genie ayaa laga sii daayay dhalada shaqaaluhuna waxay awoodeen inay cadeeyaan inta lagu gudajiray Covid in ka shaqeynta guriga ay shaqeyn karto si fiicanna ay u shaqeyn karto
Daraasaddeena waxay muujineysaa in ku soo noqoshada geedi socodka shaqada shirkado badan ay ku jiri doonto siyaasad shaqo oo fog. Intaa waxaa sii dheer waxaa jiri doona qaab isku dhafan oo shaqada fog ah iyo shaqada xafiiska.
Shaqada fog waxay waxtar badan u leedahay shaqaale badan oo waxaan soo xusnay inay jiraan qaabab guud oo ka dhex dhaca shaqaalaha fog fog ee guuleysta.
Dhaqannada ugu wanaagsan ee shaqaalaha fogfog waxaa ka mid ah:
Si cad u deji rajada udhaxeysa hogaamiyaha iyo shaqaalaha agagaaraha alaabta - shaqada la qabanayo, tilmaamaha ku saabsan waqtiga loo qabanayo iyo sida shaqada loo qabanayo loola socdo.
Xiriir joogto ah oo isdaba-joog ah iyada oo loo marayo DHAMMAAN wadiiqooyinka isgaarsiinta - shaqaalaha guuleysta ee fog waxay ka faa'iideystaan ​​wada sheekaysiga kooxaha MS ama boggooda internetka, la xiriir IM xubnaha kooxda si ay ula wadaagaan wax kooxda xiisaynaya, adeegsiga emaylka oo hufan iyo ogaanshaha goorta la soo qaadanayo taleefan u dir ama si aad u codsato kulan iskaa wax u qabso ah.
Diirada saar xuduudaha shaqada si looga fogaado gubashada - shaqaalaha guuleysta ee fog waxay aqoonsadaan qiimaha ka tagida shaqada si dib loogu dhigo loona buuxiyo
Awoodda is-siinta adoo jimicsi sameynaya, socod lugeynaya, dhageysiga muusikada, fikirka iyo weydiisashada taageero ama caawimaad.
Markaad ka shaqeyneyso mashaariicda kooxda adoo adeegsanaya habka maaraynta mashruuca si loo hubiyo in qof walba uu ku xirnaado iyo in macluumaadkaas si furan loo wadaago oo ay ku jiraan jadwalka iyo waxyaabaha la soo gudbiyo.
Hoggaamiyeyaasha guuleysta ee guuleysta ayaa si ula kac ah ula socda baaritaannada toddobaadlaha ah ee mid kasta oo ka mid ah xubnahooda kooxeed si gaar ah u weydiiyaan 'sidee tahay xaalkaagu?' iyo in la siiyo taageero iyo tababarid.
Qorshaynta mudnaanta mudnaanta toddobaad kasta - diirada saarida 3 mudnaanta koowaad maalin - dejinta yoolalka la gaari karo ee alaabooyinka la soo gudbiyo.
Jadwal jadwalka goobta u dhexeysa kulamada is-dhexgalka - dejinta kaydka 15 illaa 30 daqiiqadood inta u dhexeysa shirarka waxay u oggolaaneysaa kala-bixin, socod iyo inaad ka nasato shaashadaha.
Ka doodista maalin kasta adoo si dhakhso leh u hubinaya waxa la qabtay, wixii si fiican u dhacay iyo maxay si fiican u qaban karaan maalinta ku xigta (oo diiradda la saaray horumarinta joogtada ah).
Ma dhayalsan karno 'maskaxda shaqaalaha' iyo sida ay u saameyneyso mustaqbalka goobta shaqada. Waxaan ku jirnaa 'suuqa shaqaalaha' taas oo macnaheedu yahay in shaqaaluhu ay diyaar u yihiin inay shaqo ka raadsadaan meel kale haddii loo-shaqeeyehooda uusan siin karin shaqo fog.
Haddii aan diirada saarno dhaqamada ugu fiican ee shaqaale fog waxaan ka faa'iideysan karnaa wax ku oolnimada sida shaqada meel fog laga qabto.